​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည် -အ​တွက် ​မြန်​မာ​ပြည်​တွင်းမှ ​အား​ပေး​စာ​တ​စောင်
Read more	အ​ရှိ​တ​ရား​ရဲ့​တန်​ဘိုး​ကို ​နား​လည်​ဖို့ ​တန်​ဘိုး​ထား ​တတ်​ဖို့ ​လို​
( 29 February 16 ) ﻿
​ဒေါ်​အောင်​ဆန်း​စု​ကြည် ​ဆို​တာ ​သ​မ္မ​တ​ဖြစ်​မှ ​အ​ဖိုး​တန်​တာ​ မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး - ​အ​ရှိ​တ​ရား​ကို​က ​အ​ဖိုး​မ​ဖြတ်​နိုင်​တဲ့ ​တိုင်း​ပြည်​အ​တွက်​ ရ​တ​နာ​သိုက် ​တိုင်း​ပြည်​ရဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်​ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
​ပု​လဲ​လုံး ​ပိုင်​ရှင်​လို့ ​မိုက်​မဲ​မှု ​မျိုး ​မ​လုပ်​မိ​အောင် ​	Aung Htoo
Read more	၀မ်းမနည်းတတ်သောအစိုးရ
( 15 December 15 ) ﻿
ကျွန်တော်တို.မြန်မာနိုင်ငံသည် အင်မတန်ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းသော အစိုးရ အဆက်ဆက်၏ အုပ်ချုပ်ခြင်းကိုခံခဲ.
ကြရလေသည်ဆိုခြင်းကို ကျွန်တော်တို. ကိုယ်တိုင်ပင်
သိချင်မှသိကြ ပေလိမ်.မည် ။ အဘယ်ကဲ.သို.ပါနည်း ။	သရဝဏ်(ပြည်)
Read more	မိဖုရားဖွားစောနဲ့ ပေါက္ကံပြည်နောက်ဆုံးနေ့များ
( 29 November 15 ) ﻿
သူပုန်ထတဲ့ခေတ်ဟာ အစိုးရအားကောင်းတဲ့ခေတ်မဟုတ်ပါ။ အစိုးရတစ်ရပ် တရားမဲ့သွားတာနဲ့၊ အားနည်းလာ
တာနဲ့ သူပုန်ထတာ ဓမ္မတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ပဒေသရာဇ်ခေတ်မှာပါ။ ပုဂံလက်နက်နိုင်ငံတော်ကို မွန်နဲ့ မြန်မာတို့ အတူထူထောင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း(၃၀ဝ)နီးပါး တည်တံ့ခဲ့ကြောင်း	URavika
Read more	ဂုဏ်ယူစရာ ပြည်မြန်မာ
(7November 15 ) ﻿
ဂျိုလီလာလည်း အလှူခံမယ်၊-ဂျက်ကီလာလည်း အလှူခံမယ်- ဧည့်သည်လာလည်း တောင်းမယ်။-ကိုယ်က ဧည့်သည်သွားလုပ်လည်း တောင်းမယ်။
လူဖြူဆီကလည်း တောင်းမယ်။- လူမဲဆီကလည်း တောင်းမယ်။
ပြည်သူဆီကလည်း တောင်းမယ်။- တောင်းသမျှ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်ရောက်ရောက်သွားမှန်း မသိအောင် မျက်လှည့်ပြကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်။	နန္ဒာ
Read more	အသံတိတ် ဗမာပြည်ထဲမှာ
( 28 November 15 ) ﻿
အကြောက်တရားတွေက ဖုံးပိတ်ထားလို့လေ။	အောင်ဆန်းစုကြည်
Read more	ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်
( 29 June 15 ) ﻿
ဗိုလ်ချုပ် နဲ ဗိုလ်ထွန်းလှ ဧည့်ခံပွဲပြီး လို့ကားဆီ ကို ပြန်လာတော့ ရဲဘော်ကျော်စိန် တစ်ယောက် တခေါခေါ ဟောက်လျက် ကားနောက် ခန်းမှာ အိပ်ပျော် နေပါတယ်။ ရဲဘော်ကျော်စိန် ဟာ ဧည့်ခံပွဲ မှ ကားသမားများကို တိုက်တဲ့ ဘီးဟိုက် Bee-Hive (ပျားအုံဘရန်ဒီ)ကို အားပါးတရ သောက်တာ များသွားပြီး Ayesay
Read more	ကျွန်မသာ ပညာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့လျှင် ( 21 June 15 ) ﻿
ကျွန်မမောင်လေးငယ်ငယ်က သူငယ်တန်းဖတ် စာမှာ ‘သားတို့၊ သမီးတို့စားဖို့၊ စားစရာတွေဝယ်ခဲ့သည်’ ဟူသောစာကြောင်းကို ဖတ်ရာ၌ ‘စားဖို့စားစ ရာ’ ကိုသူဆို၍ မရချေ။ ‘စားဖို့ရရာတွေ . . . .’ ဟုသူဖတ်နိုင်သည်။ ကျွန်မတို့ရယ်နေခဲ့ကြ၏။	ရွှေကူမေနှင်း
Read more	လူ‬ -အ- ကြီး
( 15 June 15 ) ﻿
လိုက်ပါ့မယ်တဲ့ ... ခင်ဗျားကြီး အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တော့ ဒီခေတ်လူကြီးတွေက ၃ သိန်းထက်ပိုမယူရဲကြတော့ဘူးလေဗျာ မောင်အေးချမ်း Read more	စာဖတ်ခြင်း
( 8 June 15 ) ﻿
"အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ စာဖတ်မှပဲ မကြမ်းတမ်း၊ ဒုံးမဝေး၊ မသိမ်ငယ်
တတ်မှာ"တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်.. စာပေနဲ့ဝေးရင် လူဟာ တဖြည်းဖြည်း ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်း လာတတ်ပါတယ်။	Essential Moe Read more	Other links